15 Su'aalood oo aad Weydiineyso API-gaaga Kahor Xulista Madal | Martech Zone
Arbacada, December 30, 2020 Khamiis, Maarso 4, 2021 Douglas Karr
Saaxiib wanaagsan iyo lataliye ayaa soo qoray su'aal aniga iyo waxaan jeclaan lahaa inaan u isticmaalo jawaabahayga qoraalkan. Su'aalihiisu waxay xoogaa diirada saareen hal warshad (Email), marka waxaan guud ka dhigay jawaabahayga dhammaan API-yada. Wuxuu waydiiyay su'aalaha ay tahay inay shirkadu waydiiso iibiyaha wax ku saabsan API-ga kahor intaan xulashada la samayn.
Maxaad Ugu Baahan Tahay API-yada?
An barnaamijka barnaamijka barnaamijka (API) waa isku xirnaanta nidaamka kombiyuutarka, maktabadda, ama arjiyada ay bixiso si loogu oggolaado codsiyada adeegyada in laga sameeyo barnaamijyada kale ee kombiyuutarka, iyo / ama loo oggolaado in xog la is weydaarsado.
Sida aad u qorto URL oo aad jawaab ugu hesho bogga internetka, API waa hab ay nidaamyadaadu ku codsan karaan oo ay ku heli karaan jawaab celin si ay u iswaafajiyaan xogta udhaxeysa. Maaddaama shirkaduhu ay u muuqdaan inay si elektiroonig ah isu beddelayaan, otomatiga shaqooyinka loo maro API-yada ayaa ah hab fiican oo lagu hagaajiyo waxtarka ka dhex jira ururka loona yareeyo qaladka aadanaha.
API-yada ayaa udub dhexaad u ah otomaatiga, gaar ahaan codsiyada suuqgeynta. Mid ka mid ah caqabadaha marka aad wax u iibineyso iibiye weyn oo leh wax dhameystiran API taasi waa in ilaha horumarka iyo kharashyada badanaa ay yihiin feker kadib. Kooxda suuq-geynta ama CMO ayaa laga yaabaa inay kexeeyaan iibsiga arjiga mararka qaarkoodna kooxda horumarintu ma helaan aqbalin badan.
Baadhitaanka awoodaha isdhexgalka ee barmaamijka iyada oo loo marayo API waxay u baahan tahay wax ka badan su'aasha fudud, Ma jiraa API?
Haddii aad ku saxiixdo codsi aad si liidata u taageeray ama loo diiwaangeliyay API, waxaad ku kaxayn doontaa kooxdaada horumarka waalli oo isku-darkaaga ayaa u muuqda inuu gaabin doono ama gebi ahaanba fashilmi doono. Raadi iibiyaha saxda ah, isdhexgalkaaga ayaa shaqeyn doona dadkaaga horumarkuna waxay ku farxi doonaan inay ku caawiyaan!
Su'aalaha Cilmi-baarista Awoodooda API:
Farqiga u gaarka ah - Aqoonso astaamaha adeegsigooda 'interface interface' ee laga heli karo wejiga barnaamijyada barnaamijyada. Waa maxay astaamaha uu leeyahay API-ga ee aanu UI lahayn iyo taa lidkeed?
Miisaanka - Weydii inta wicitaan ee iyaga lagu sameeyo API maalin kasta. Ma leeyihiin barkado gaar ah oo loo qoondeeyey? Tiradu aad iyo aad ayey muhiim u tahay maadaama aad rabto inaad aqoonsato in API-ga uu yahay ka-fikir dambe ama dhab ahaan qayb ka mid ah istiraatiijiyadda shirkadda.
Warqadaha - Weydii dukumintiga API. Waa inuu noqdaa mid adag, higaadinaaya astaamo kasta iyo isbeddele laga heli karo API-ga.
Community - Weydii inay leeyihiin ama ay leeyihiin Bulsho Developer khadka toosan ah oo diyaar u ah inay la wadaagaan koodhka iyo fikradaha horumariyaasha kale Bulshooyinka horumarineed waxay fure u yihiin bilaabida dadaalkaaga horumarka iyo isdhexgalka si deg deg ah oo hufan. Halkii aad ka 'amaahin lahayd' ninka API ah 'shirkadda, waxaad sidoo kale ka faa'iideysanaysaa dhammaan macaamiishooda horay u soo maray tijaabooyin iyo khaladaad isku xirka xalkooda.
REST vs SOAP - Weydii nooca API waxay leeyihiin… Caadi ahaan waxaa jira REST APIs iyo Adeegyada Shabakadda (SOAP) APIs. Waxaa laga yaabaa inay labadaba horumarinayaan. Ku dhexgalka midkoodna wuxuu leeyahay faa iidooyin iyo habaar… waa inaad aqoon u leedahay waxa ay awoodaan is-dhexgalka kheyraadkaaga (IT).
Languages - Weydii barnaamijyada iyo barnaamijyada ay si guul leh u dhexgeliyeen oo codso xiriirada si aad uga ogaato macaamiishaas sida ay ugu adkayd isdhexgalka iyo sida wanaagsan ee ay u socoto API.
Xaddidaadda - Weydii xaddidaadda uu iibiyuhu ku leeyahay tirada wicitaannadii saacaddiiba, maalintiiba, usbuucii, iwm. Haddii aadan la socon iibiyaha wax lagu kici karo, koritaankaaga waxaa xaddidaya macmiilka.
Muunado - Ma bixiyaan maktabad tusaalooyin koodh ah si ay si fudud ugu bilaabaan? Shirkado badan ayaa daabaca SDK (Qalabka Horumarinta Software) ee luqado iyo qaabab kala duwan oo dardar galin doona jadwalkaaga isdhexgalka.
ciideed - Miyay bixiyaan meel aan wax soo saar lahayn ama jawi sanduuqa ciida ah si aad ugu tijaabiso lambarkaaga?
Kheyraadka - Weydii inay kheyraad gaar ah ku dhex leeyihiin shirkadooda. Ma leeyihiin koox latalin gudaha ah oo diyaar u ah isdhexgalka? Hadday sidaas tahay, ku tuur saacado heshiiska qandaraaska!
Ammaanka - Sidee bay u xaqiijinayaan iyagoo isticmaalaya API-ga? Ma aqoonsiga isticmaalaha, furayaasha, ama habab kale? Ma xaddidi karaan codsiyada cinwaanka IP-ga?
Uptimmo - Weydii waxa ay leeyihiin API waqtiga shaqada iyo heerka qaladka waa, iyo marka saacadaha dayactirkoodu yahay. Sidoo kale, istiraatiijiyado looga shaqeeyo hareerahooda waa muhiim. Ma leeyihiin hawlo gudaha ah oo dib isku dayi doona API wicitaano haddii ay dhacdo in diiwaanka aan la heli karin nidaam kale awgood? Tani ma wax ay ku farsameeyeen xalkooda?
SLA - Ma leeyihiin a Heshiiska Heerka Adeegga halkee waqtiyada waa inay ka sarreeyaan 99.9%?
Roadmap - Waa maxay astaamaha mustaqbalka ay ku darayaan API-kooda iyo maxay yihiin jadwalka bixinta la filayo?
Isdhexgalka - Waa maxay isku-dhafka wax soo saarka ah ee ay soo saareen ama kuwa saddexaad ay horumariyeen? Mararka qaarkood, shirkaduhu waxay iska dhaafi karaan horumarka gudaha ee astaamaha marka is-dhexgal kale oo wax soo saar horey u jiray oo la taageero
Furaha su'aalahan ayaa ah in isdhexgalku 'kugu guursado' madasha. Ma doonaysid inaad qof guursato adigoon aqoon u lahayn inta aad ka ogaan karto, ma rabtaa? Tani waa waxa kaliya ee dhaca marka dadku iibsadaan barxad iyaga oo aan aqoon u lahayn awooda is dhexgalka.
Marka laga soo tago API, waa inaad sidoo kale isku daydaa inaad ogaato waxa kale ee kheyraadka is-dhexgalka ee ay lahaan karaan: Barcoding, khariidaynta, adeegyada nadiifinta xogta, RSS, Foomamka Websaydhka, Widgets, Isdhexgalka Wadaagga Rasmiga ah, Mashiinnada Qoraalka, dhibcaha SFTP, iwm.
Tags: APIdukumiintiga apiqiimeynta apimuuqaalada apisu'aalaha apicilmi baarisbarnaamijka barnaamijyada barnaamijkamuuqaaladanasashosanduuqasdkheshiiska heerka adeegga
Mawduuc weyn sida had iyo jeer Doug!
Aad baad u mahadsantahay, Jon! Had iyo jeer u mahadnaq qof waqti siinaya inuu uga tago qoraal nooc ah.